ဖေ့ဘုတ်ခ်ပေါ် က Coronavirus သတင်းအမှားတွေကြောင့် စိတ်ပူနေပြီလား.......... - Hello Sayarwon
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက လူအများကြားမှာစိုးရိမ်မှုမြင့်တက်စေနေတဲ့ ဝူဟန်မြို့ကနေအစပြုခဲ့တဲ့Coronavirus နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖေ့ဘုတ်ခ်ပေါ်မှာ ထွက်ပေါ်နေတဲ့ သတင်းအမှားတွေကို ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအသုံးပြုပြီး ဖြေရှင်းမှုတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးဟာ အချိန်နဲ့အမျှ Coronavirus နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူအများကြားမှာ ပြန့်နှံ့နေတဲ့ သတင်းအမှားတွေကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။
2019-nCoV နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အများဆုံး ပြန့်နှံ့နေတဲ့ သတင်းတစ်ခု
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ2019-nCoV ကိုကာကွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းတဲ့ သတင်းပေါင်းများစွာပြန့်နှံ့နေ ပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အများဆုံး ပြန့်နှံ့နေတဲ့ သတင်းတစ်ခု
မီးပန်းတွေ၊ ဗြောက်အိုးတွေကနေထွက်တဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေက 2019-nCoV ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလား…..ဆိုတဲ့ အမေးပါ။
အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဒီမီးခိုးတွေက မျက်လုံးတွေ၊ လည်ချောင်းနဲ့ အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေတာကလွဲလို့ လုံးဝမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာပါ။
2019-nCoV နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အမေးအများဆုံး မေးခွန်းတွေက
(၁) antibiotics တွေက coronavirus အသစ်ကို ကာကွယ်ကုသပေးနိုင်လား….
မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ coronavirus အသစ်က ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့် ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကို ကုသဖို့ antibiotics တွေကို အသုံးပြုလို့မရပါဘူး။ antibiotics တွေက ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုတွေကို ကုသဖို့အတွက်ပဲ အသုံးပြုလို့ရတာပါ။ ဒါကြောင့် coronavirus အသစ်ကို ကာကွယ်ကုသဖို့ antibiotics ကို အသုံးပြုတာက ထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။
(၂) အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကနေ coronavirus အသစ် ပြန့်နှံ့နိုင်လား………
လက်ရှိမှာတော့ ဒီလိုမျိုး ကူးစက်နိုင်တယ်လို့ အထောက်အထားမရှိသေးပါဘူး။ ခွေးတွေ၊ကြောင်တွေကနေ coronavirus အသစ်ကို မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စိတ်ချချင်ရင် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ကိုင်ပြီးတိုင်း ဆပ်ပြာနဲ့ရေကို သုံးပြီး လက်ကို သေချာဆေးကြောပါ။
(၃) အဆုတ်ရောင်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ကာကွယ်ဆေးက coronavirus အသစ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်လား……..
အဆုတ်ရောင်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ pneumococcal ကာကွယ်ဆေးနဲ့ Haemophilus influenza type B (Hib) ကာကွယ်ဆေးတွေက coronavirus အသစ်ကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားက အသစ်ဖြစ်တာကြောင့် ကာကွယ်ဆေးအသစ်လည်း လိုအပ်မှာပါ။
(၄) တရုတ်ကနေပို့တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို လက်ခံဖို့ စိတ်ချရပါ့မလား…..
စိတ်ချရပါတယ်လို့ ပြောပါရစေ။ အကြောင်းကတော့ တရုတ်ကပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းထုပ်တွေ၊ စာတွေမှာ 2019-nCoV ထိတွေ့ကူးစက်ထားနိုင်ပေမယ့် လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ သိရတာက ဒီ coronaviruses ဟာ ပစ္စည်းထုပ်တွေ၊ စာတွေလိုမျိုး အရာဝတ္ထုတွေအပေါ်မှာ အချိန်အကြာကြီးမရှင်သန်နိုင်ဘူးဆိုတာပါ။
(၅) နှမ်းဆီက ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို 2019-nCoV မဝင်ရောက်အောင် တားဆီးပေးနိုင်လား……
မတားဆီးပေးနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ နှမ်းဆီမှာ 2019-nCoV ကို သေစေနိုင်တဲ့ အာနိသင်မရှိလို့ပါ။ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကို သေစေနိုင်တဲ့အရာတွေက ဆပ်ပြာရည်၊ ပိုးသတ်ဆေးတွေလိုမျိုး ပိုးတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင် နေတဲ့အရာတွေပါ။
(၆) မီးပန်းတွေ၊ ဗြောက်အိုးတွေကနေထွက်တဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေက 2019-nCoV ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သလား…..
အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ဒီမီးခိုးတွေက မျက်လုံးတွေ၊ လည်ချောင်းနဲ့ အဆုတ်ကို ထိခိုက်စေတာကလွဲလို့ လုံးဝမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာပါ။ ဒါတွေက အန္တရာယ်များစေတာကလွဲလို့ ဘာမှ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
(၇) ကြက်သွန်ဖြူစားတာက 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာကို ကာကွယ်နိုင်လား……….
ကြက်သွန်ဖြူက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားစရာတစ်ခုဖြစ်သလို ဘက်တီးရီးယားတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတာတော့အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကြက်သွန်ဖြူစားတာက လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတော့မတွေ့ရသေးပါဘူး။
(၈) အရက်သောက်တာက 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာကို ကာကွယ်နိုင်လား……….
မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ အရက် အပါအဝင် အယ်လ်ကိုဟောပါတဲ့ သောက်စရာတွေက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတာမျိုးပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ် အပါအဝင် ဘယ်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမှ မကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာပါ။
2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာကို အမှန်ကန်ဆုံး ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ……….
လူအများကြားမှာ စိုးရိမ်နေတဲ့ 2019-nCoV ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာကို အမှန်ကန်ဆုံးကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်
နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့အခါ နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကို ဖုံးအုပ်ထားပါ
မကြာခဏ လက်ကို ဆပ်ပြာ နဲ့ ရေအသုံးပြုပြီး သေချာသန့်စင်ဆးကြောပါ
အသားတွေ၊ ငါးတွေကို ကျက်အောင်ချက်စားပါ။